အရောင်အပြည့် LED display သည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုမည်သို့ဖြစ်လာစေမည်နည်း? - ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
အရောင်အပြည့် LED display သည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုမည်သို့ဖြစ်လာစေမည်နည်း?
အလင်းရောင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မီတာမပါ ၀ င်ရောင်စုံ LED display မျက်နှာပြင်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နည်းသည်စားသုံးသူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုင်တွယ်ရမည့်အရေးကြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။.
LED display screen ကိုတစ်ချိန်ကမြို့၏လမ်းထောင့်တိုင်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးမြို့၏ပုံရိပ်ကိုတိုးတက်စေရန်ဘုံသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်. သို့သော်, မြို့ပုံရိပ်ကိုအလှဆင်နေစဉ်, ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိပြင်းထန်သောအလင်းရောင်သည်မြို့ပြနေထိုင်သူများ၏ညဘက်လူနေမှုဘဝအပေါ်အချို့သောဆိုးကျိုးများလည်းရှိခဲ့သည်. LED လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် “မှိန်နေသည်” စက်မှုလုပ်ငန်း, နှင့်မျက်နှာပြင် “တောင်ပေါ်အလင်း” ငြင်းလို့မရဘူး. သို့သော်, မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမှခြောက်သွေ့သောခန့်မှန်းချက်, ၎င်းသည်တစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည် “အလင်းညစ်ညမ်းမှု”. ထို့ကြောင့်, လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြသနာကိုသတိထားသင့်တယ် “အလင်းညစ်ညမ်းမှု” နှင့်တောက်ပ setting ကိုထိန်းချုပ်ပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းသည်အလိုအလျောက်တောက်ပမှုထိန်းညှိမှုစနစ်ကိုလက်ခံသည်.
နေ့အလင်းရောင်နှင့်နေ့အလင်းရောင်ခြားနားမှုပေါ် မူတည်၍ display တောက်ပမှုအပြောင်းအလဲအချို့သည်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်, site ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စံတော်ချိန်. အရောင်အပြည့် LED display ၏ regenerative brightness ကိုပြသည့်အခါ screen ထက်ပိုကြီးသည် 50% ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်၏, ၎င်းသည်မျက်လုံးနှင့်ပုံစံမသက်မသာခံစားရလိမ့်မည် “အလင်းညစ်ညမ်းမှု”.
ထိုအခါ, ပြင်ပအလင်းရောင်ရရှိမှုစနစ်မှတဆင့်, ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ရရှိမှုကိုအချိန်မရွေးရပ်တန့်စေနိုင်သည်, စနစ်အချက်အလက်များရယူရန် LED display control system ကိုသုံးပါ, ၎င်းကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆော့ဝဲများမှတဆင့်သင့်တော်သောပတ်ဝန်းကျင်၏တောက်ပမှုသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းပါ.
ဒုတိယထိန်းချုပ်နည်း: multi-level gray correction နည်းပညာ.
သာမန်အရောင်အပြည့် LED display system သည် 18bit color display layer ကိုအသုံးပြုသည်. ထို့ကြောင့်, မီးခိုးရောင်အဆင့်နှင့်အရောင်နိမ့်လျှင်အလွန်အကျွံဖြစ်လျှင်, အရောင်ကတောင့်တင်းလိမ့်မယ်, ရလဒ်အနေဖြင့်အရောင်မီးများကွဲလွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်. LED မျက်နှာပြင်ကြီးထိန်းချုပ်စနစ်အသစ်သည် 14bit ၏အရောင်ပြသမှုကိုလက်ခံသည်, အလွန်အကျွံအရောင်မာကျောမှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်, ကြည့်တဲ့အခါလူတွေကအရောင်ကိုပျော့စေတယ်, အလင်း၏နွေးထွေးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်.
ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍, အရောင်အပြည့် LED display ကိုယ်တိုင်သုံးသော luminous data များသည်စွမ်းအင်ချွေတာသည်, ဒါပေမယ့် display ဧရိယာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတော့ကြီးမားတဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့လိုတယ်. ၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုလျှင်, စုစုပေါင်းပါဝါသုံးစွဲမှုသည်အလွန်ကြီးမားနေဆဲဖြစ်သည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိုအပ်သောတောက်ပမှုမှာအတော်လေးမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤပေါင်းစပ်အချက်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်ရှိသည်, display ၏ပါဝါသုံးစွဲမှုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်. ထို့နောက်ကြော်ငြာရှင်များမှပေးသောလျှပ်စစ်မီတာခများအားလုံးအဆတိုးလာလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အောက်ပါအချက်ငါးချက်မှတဆင့်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုရပ်တန့်နိုင်သည်.
(1) မြင့်မားသောတောက်ပထိရောက်မှုရှိသော LED ကိုသုံးနိုင်သည်, အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်သည့်ချစ်ပ်သည်ထောင့်များကိုမဖြတ်တောက်ပါ.
(2) စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် switching power supply ကိုသုံးခြင်းသည်ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်.
(3) အလွန်ကောင်းမွန်သော screen cooling design ကိုရပ်တန့်ပြီး fan power သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချပါ.
(5) စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ပြောင်းလဲမှုများအတိုင်းပြင်ပ display မျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပါ.
ဘေးဘက်မှတောက်ပသောပွင့်လင်းသော LED display ကို ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်သည်